निकै सन्की स्वभावका हुन्छन् यी राशिका व्यक्ति, तपाईको कुन ? – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /रोचक/निकै सन्की स्वभावका हुन्छन् यी राशिका व्यक्ति, तपाईको कुन ?
4,8732minutes read
काठमाडौँ । मानिसको स्वभावमा उसको राशिले पनि प्रभाव पार्छ। कोहि मानिस खुसमिजास हुन्छन्, कोहि रिसाहा हुन्छन्, कोहि मानिस निकै संकी हुन्छन्। मानिस कति संकी छ भनेर उसको राशिले पनि प्रभाव पार्छ।
सनकपनाको मामलामा यस राशिका मानिस सबैभन्दा संकी हुन्छन्। यिनीहरुलाई बहुत कम चिज मन पर्छ तर मन परेको चिज प्राप्त गर्न हर हद पार गर्न तयार हुन्छन्।**भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला **
यिनीहरुको सनक पनाको वयान गर्न सकिँदैन्। यिनीहरु कुनै कार्यमा सफल भएनन् भने उक्त कार्यको जिम्मेवार अर्कोलाई ठहराईदिन्छन्।
यस राशिका व्यक्तिहरु कुनै चीजको लागि जति नै उत्साहित भएपनि त्यसको लागि कहिले पनि आक्रामक हुँदैनन्। यिनीहरूमा आत्मविश्वासको कमी हुन्छ र आफुसँग भएको चिजबाट सन्तुष्ट हुन्छन्।
सनकपनाको मामलामा यस राशिका मानिस पनि कम हुँदैनन्। काम जस्तोसुकै होस्, सानो होस् वा ठूलो, यिनीहरू सबैका बारे धेरै उत्साहित हुन्छन्। तर यिनीहरूको विशेष गुण भनेको उनीहरू आफ्ना गल्तीहरू स्वीकार्न जान्दछन्।
यदि उनीहरूले आफ्नो गल्ती थाहा पाए भने , यिनीहरु यसलाई सुधार गर्न धेरै प्रयास गर्छन् र सुधार गरेरै छोड्छन्।
कर्कट राशिका व्यक्तिहरू कुनै पनि चीजको बारेमा धेरै उत्साहित हुन्छन् । तर उनीहरू आफ्ना गल्तीहरू स्वीकार्दैनन्। तसर्थ, यिनीहरू कहिले पनि यी अवस्था बुझ्दैनन्। यस राशिका मानिस पनि निकै संकी हुन्छन्।
यस मामलामा, यस राशिलाई सन्तुलित प्रकृतिको भन्न सकिन्छ। यिनीहरू पूर्णताका मालिकहरू हुन् र आफूलाई सर्वश्रेष्ठ सम्झन्छन्, तर प्रत्येक पटक उनीहरू आफूलाई सर्वोत्तम भन्छन्, उनीहरूको दिमागमा पनि डर हुन्छ कि उनीहरूको यी कुरा भोलि ठीक हुन्छ कि हुँदैन भनेर। यसै कारण हो कि यिनीहरू कुनै चिजको लागि धेरै प्रयास गर्दछन्, तर पूर्ण नभए पनि उग्र हुँदैनन्।
कन्या राशिका व्यक्तिहरु पनि सनकपनाको मामलामा कोहि भन्दा कम हुँदैनन्। यिनीहरूले अरूलाई मात्र होइन आफैलाई पनि जज गर्छन्।
यिनीहरूको सबै चीजमा कमी–कमजोरी खोज्ने बानी हुन्छ। यहि कारण हो जब यी व्यक्तिले केहि कुरा वा व्यक्तिलाई पछ्याइरहेका छन् भने यिनीहरुबाट पिछा छुटाउन असम्भव छ।
तुला राशिका मानिस यो मामलामा सबैभन्दा पछाडि हुन्छन्। यिनीहरु कुनै पनि चिजलाई लिएर संकी हुँदैनन्। तर आफुलाई बचाउने अवस्थामा भने यिनीहरुको पूरा सनकपना बाहिर आउँछ ।
यस मामलामा वृश्चिक राशिका मानिसलाई छुपा रुस्तम भन्न सकिन्छ। यिनीहरू धेरै संवेदनशील हुन्छन्। तसर्थ, कुनै कुरा को बारेमा यिनीहरू जति नै आक्रामक भएपनि अरु व्यक्तिहरु यिनीहरूको संवेदनशीलताको कारण आक्रामक स्वभावतर्फ ध्यान दिन असमर्थ हुन्छन्। यस कारणले, यिनीहरूको सनकपना मानिस बीच देखा पर्दैन।
धनु राशि सनकपनाको मामलामा सबैभन्दा माथिको श्रेणीमा पर्छन्। यिनीहरु बुद्धिमानी र तेज दिमागका हुन्छन्, यिनीहरुलाई पराजय सहन हुँदैन ।
यिनीहरूको मनोवृत्ति यस्तो हुन्छ कि यदि यिनिहरु पराजित भए भने, तब सबैजनाले यसको असर भोग्नुपर्छ। यसले यिनीहरूको सनकपना नकारात्मक बनाउँछ।
यस राशिका मानिस आफ्नो गल्ती स्वीकार गर्दैनन्। त्यसैले कहिले काही यस्तो अवस्था आयो भने यिनिहरु निकै रिसाहा स्वभावका हुन्छन्। यिनीहरु पनि आफुले आफैँलाई सर्वोत्तम मान्छन्। यहि कारणले गर्दा यिनीहरु निकै संकी स्वभावका हुन्छन्।
पानी तत्वले चन्द्रमाको प्रतिनिधित्व गर्दछ, जुन दिमागी उग्रतासँग जोडिएको छ। यस पानी तत्व कुम्भमा प्रबल हुन्छ।
यिनीहरूको विशेष खुबी यो हो कि यिनीहरू सजिलैसँग कुनै ठूलो भार सम्हाल्न सक्छन्, तर जब यिनीहरूलाई कुनै कुराले निराश पार्छ, तब यिनीहरु भन्दा बढि संकी कोहि हुँदैन।
यस राशिका मानिस सधैँ कुनै न कुनै कुरालाई लिएर दुखी रहन्छन्। तर यिनीहरु आफ्नो गल्ति कहिल्यै पनि स्वीकार्न तयार हुँदैनन् । यिनीहरु निकै संकी भएता पनि कुनै पनि प्रकारको असफलताले हरेस खाँदैनन्।
बिहेमा साथीले भोलाको माला र दुध-दानी चुसाइदिएको भिडियो भाइ’रल (भिडियो हेर्नुस्)
तपाईलाई पैसाको हाहाकार भैरहेको छ ? पर्समा राख्न नबिर्सनुहोस् यी ७ बस्तु